Wasiir Goodax: Ma jirto aniga ayaa maamulka degmada taabsaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka arimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya C/laahi Goodax Barre sheegay in mas’uuliyiinta maamulka degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwa gobollada looga baahanyahay iney aqbalaan isbadelka socda iyo xil ka qaadis ku imaan karta sida uu yiri.
Wasiir Goodax ayaa hadalkaan ka jeediyey munaasabad agaasimayaasha wasaaradiisa gaadiid iyo qalab lagula wareejinayey oo ka dhacday xarrunta Oto Oto ee magaalada Muqdisho.
Wasiir Goodax ayaa yiri “Isbedel maamul ayaa ka socda Muqdisho iyo degmooyinka gobollada, qofkii la badelo waa inuu aqbalaa, ma jiraan waxyaabaha la sheegayo ee ah aniga ayaa qabsaday, aniga ayaa taabsaday ama aniga ayaa ku dhibaatooday”.
“Qof kasta ee la badelo waa inuu aqbalaa xil ka qaadista, maxaa yeelay ma jiro qof meesha ka dhashay” ayuu sidoo kale wasiir Goodax oo tilmaamay iney soo soconayaan qorshaha wax ka badelka maamulka degmooyinka dalka.
Qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwa kale oo maamula degmooyin gobollada ka tirsan ayaa isku adkeeyey xilka, inkastoo qaarkood awood looga qaaday, halka qaar kalana weli harsan yihiin.